15 Nolosha qoyska - Ku soo dhowow Nederland
'Nin walbowba naftaa'
Haddii Soomaalida la barbardhigo dadka reer Nederland waa dad uu qof walba naftiisa ka fekero, oo qorshaysto. Taas macnaheedu waa in qoyska ama fikradda qoyska muhiimad yar la siiyo. Haddii aad qaan-gaadhtid waxaa lagaaga fadhiyaa inaad go'aano madax-bannaan qaadan kartid. Nederland qabiil ama qabyaaladi kama jirto. Dadku way siman yihiin waxayna xuquuq u leeyihiin inay heer gaadhaan.
Taas macnaheedu maaha inaanay dadka reer Nederland qoyskooda qiimayn. Gaar ahaan qoysaska baadiyahu aad bay isugu xidhan yihiin, laakiinse berigii hore ayuu xidhiidhka qoysku ka sii adkaa. Tusaale ahaan markii ay carruurtu waalidkooda gaboobey guryaha ku hayn jireen, oo ay ilaa iyo intay ka dhimanayaan daryeeli jireen. Sidan aad bay u yar tahay in la sameeyo hadda.
Dadka reer Nederland badankoodu aad bay muhiim ugu tahay inay maalinta dhalashadooda u dabaaldegaan. Maalintaa asxaabta iyo qaraabada ayaa la marti qaadaa. Dadku qol bay wada fadhiistaan oo ku sheekaystaan. Keeg iyo cunnooyin kale ayaana la cunaa. Qof kastoo soo booqdaana hadiyad ayuu u keenaa qofka dhashay, hadiyadahaasoo isku mar la wada furo. Taas xushmayn ayay dadku u arkaan. Haddii aad maalinta dhalashada imaan kari weydo. kaadh tahniyad ah ayaad qofka u soo diraysaa. Ku dhowaan qof kastoo reer Nederland ah wuxuu haystaa Kalender uu ku calaamaysto dhalashada dadka, si uu u ogaado goortuu qof kasta dhashay. Kalenderkani wuxuu badanaa sudhan yahay musqusha.
Gaar ahaan carruurta yar yar maalinta dhalashadu aad bay muhiim ugu tahay. Badanaa waxaa iyaga loo xidhxidhaa slingers iyo cinjiro la buufiyay. Waxaa loogu heesaa hees maalinta dhalashadooda si khaasa loogu diyaariyey, taasoo loogu rajeeyo cimri dheer. Mararka qaarkood keeg ayaa loo dubaa kaasoo shamac shidan laga dul taago. Tusaale ahaan, haddii cunnuggu laba sanno jiro keegaa laba shamac baa laga dul taagaa. Marka uu cunnugga dhashay shamaca afuufo oo demiyo kaddib ayaa keega la cunaa.
Guurku waa marxalad kale oo nolosha qoyska aad muhiim ugu ah. Guurarku aad bay u kala duwanaan karaan. NInka guursanaya ayaa gabadha baabuur qurux badan ku soo qaada, kaasoo cinjiro la buufiyey dusha lagaga xidhxidhay. Dabadeedna waxay isu raacaan xafiiska magaaladaas laga xukumo 'het gemeentehuis'. Halkaasoo la isugu meheriyo, oo uu sameeyo nin arintaa dawlada ugu xilsaaran. Masiixiyiinta waxaa tan u dheer inay kaniisada tagaan si guurkooda loogu duceeyo, oo loo barakeeyo. Maalinta inteeda kale xaflad weyn baa la dhigaa, oo waa la dabaaldegaa. Beryahan dhalinyaro badani iyagoo aan is qabin bay wada noolaadaan. Masiixiyiintu tan raali kama aha. Waxay rumaysan yihiin inay dadku is guursadaan, iyo inuu qofku galmada iska ilaaliyo ilaa uu ka guursanayo. Dad badan oo reer Nederland tan waxay u arkaan fikrad gabowday oo laga tegey.